Usuku: Ngomhla we-8 kuDisemba ngo-2019
Izmir iiyure zeMetro
Iiyure zeMetro zase-İzmir: I-mzmir Metro ibisebenza ngokufihlakeleyo nangaphezulu nangaphezulu nangokuhamba ngaphakathi kwesixeko iminyaka emininzi. I-mzmir, inethiwekhi ebanzi yoololiwe, [More ...]
Ngaba siza kubakho isitishi sikaloliwe eGürsu kwisithili saseBursa?
Ngaba kuya kubakho isikhululo sikaloliwe kwisithili saseGürsu eBursa ?; Ngelixa umsitho wokuqhekeza umhlaba ububanjelwe e-2012, esinye isikhululo sikaloliwe i-2 sabonwa eBursa, esinye eBalat esinye eGürsu. wokugqibela [More ...]
Luphi uqeqesho oluya eBursa?
Yintoni eya eBursa; Kwiveki ephelileyo,… IKomishini yoCwangciso loHlahlo-lwabiwo mali yeNdibano yesiZwe yaseTurkey yayixoxa ngohlahlo-lwabiwo mali lweCandelo lezoThutho. Usekela nosekela-sihlalo we-GOOD Party Bursa yayingu-Prof.Dr. Dr. U-Tsmail Tatlıoğlu wabuza ekuhleni ukuba usekela-Mphathiswa we-2: yapılan Made in Bursa [More ...]
I-bandırma Railway Line kwi-Ajenda yoTyalo-mali
Ngokuya kuthi ngokuqonda, oosopolitiki be-leri Çanakkale kunye neBalıkesir abaxhuma amathemba abo kuthutho lukaloliwe ukuya e-Istanbul okanye e-Ankara kunye noosodolophu beBalıkesir kunye nabapolitiki baseBalıkesir batyelele i-Ankara kwaye umgca weBandırma otshintshileyo uthathiwe kwi-ajenda yotyalo-mali kwakhona. … Apha, kwakhona, injongo yokuveliswa kwemizi-mveliso kwingingqi yeAnatolia eseMbindini ukufikelela kwizibuko ngololiwe kuyaziva, kodwa nakwiBursa. [More ...]
Iprojekthi yeTarsa yeSantya esiphezulu yoQeqsho ukuze ixhaswe ngemali yiNgxelo yeNtengo yangaphandle
Iprojekthi ye-Bursa yejubane eliphezulu iya kuqhutywa ngetyala langaphandle; Ipeyinti ngoku yaziwa ngokuba yi-var kukho izigaba ezibini kumgaqo kaloliwe waseBursa-Yenişehir-Osmaneli. Umsebenzi wezibonelelo zesigaba sokuqala somgca weBursa-Yenişehir usondele kwiipesenti ze70. Amanqaku ambalwa omsebenzi anokubonwa, kodwa inkqubela phambili enzulu [More ...]
Uluhlu lwentwasahlobo ye2020 yabagqatswa abaza kwenza imisebenzi yoqeqesho lomsebenzi kwiTÜVASAŞ General Directorate ibhengeziwe.
Usihlalo we-TCDD weBhodi kunye noMphathi Jikelele u-Ali İhsan Uygun, umphathi oncedisayo jikelele kunye nabathunywa abahamba nabo bajonga umgca kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu kwi-Ankara Sivas. U-Hsan Uygun, inkampani malunga nenkqubo yenkqubela phambili [More ...]
Kwintlanganiso yakhe noMphathiswa Wezendalo kunye noCwangciso lweDolophu uMurat Kurum, ukuze avelise isisombululo esichanekileyo seengxaki zokuhamba, okokuqala i-27 emva koko ziya kuthengwa izithuthi ze-175 kwaye izithuthi zikawonke-wonke ziya komelezwa. [More ...]
Eskişehir Metropolitan Women Parkomat IGosa liya Kufumana; Umasipala wase-Eskişehir Metropolitan uvakalise ukuba uzakuqesha abaqhubi beebhasi zabasetyhini ngokwabelana ngeakhawunti yeendaba zentlalo kunye nabagqatswa abaqhubi bezithuthi abahlangabezana neemfuno zikamasipala. [More ...]
inkampani Bursa Metropolitan Municipality Transportation isiza Burulaş e Bursa Sea Iibhasi (BUDO), Turkey Basketball 1. Waba ligama lomxhasi weGemlik Basketball Club, esokolayo kwiLigi. Ukubonelela ngeholo yemidlalo kumaziko emfundo eBursa, amateur [More ...]
Umsebenzi wekhathalogu yokwakha kwi-Intanethi!
Turkey, nto leyo eye online ukususela kwiminyaka 1973 nezinto nokwakha kugcwalisa isithuba ebaluleke kakhulu yokuqala kuphela ezintsha izinto ikhathalogu NESAKHIWO WAMAKHONDO lwesithuba khathalogu, ngoku ubomi! UKWAKHA I-CATALOG, ngokubanzi [More ...]
I-Ankara Batikent Metro Imephu indlela kunye namaxabiso eTikiti
I-Ankara Batıkent Metro Map Route kunye namaxabiso eTikiti-M1 BATIKENT METROS - Ulwakhiwo metro yokuqala ye-Ankara yaqala nge-Matshi 29. Umgca metro we-1993 usekwe kwindlela ye-Kızılay Batıkent [More ...]
I-Ankara Kecioren Indlela yeMephu yeMetro kunye namaxabiso eTikiti
I-Ankara Keçiören Subway Imephu yeNdlela yokuHamba kunye namaxabiso eTikiti M4 KEÇİÖREN METROSU-Ulwakhiwo lomgca metro kwindlela yeKızılay Gazino eqale nge-15 kaJulayi 2003. Xa uMasipala wase-Ankara Metropolitan ebengenakugqiba, [More ...]
Namhlanje kwimbali: 8 ngoDisemba 1874 i-Agop Azarian Inkampani
Namhlanje kwiMbali 8 Disemba 1874 Agop Azarian Inkampani iye yazinikela ekugqityweni kwinyanga ye-12 njengomntu ongenamdla wokwakhiwa komgca we-Belova-Sofia.